Life Archives - Kanaung News
လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ့ စီးပွားစလုပ်မယ်ဆိုရင် လမ်းပေါ်မှာ ခင်းရောင်းတဲ့ ယာယီဈေးဆိုင်မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ပျံကျဈေးဆို်င်လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ လမ်းဘေးဈေးသည်ပဲ ခေါ်ကြရအောင်၊ မိသားစု အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေး အိမ်မက် အကောင်အထည်ဖေါ် ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းဘေးဈေးဆိုင်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ နိုင်ငံခြားမျာ ယနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာလမ်းဘေးဈေးသည်ကနေ ဘ၀စခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ လေ့လာမှတ်သားဖူးပါတယ်။ လမ်းဘေးဈေးသည်အလုပ်ဟာ အမြင်အားဖြင့်လွယ်သလောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုရင် အတော်လေး ပညာသားပါပါတယ်။ ရပ်တည်နိုင်ပြီဟေ့ဆိုရင်ကိုပဲ တော်တော်တွက်ခြေကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်၊ ကိုယ့်မှာအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ ရုံးဆင်းပြီးလို့ အရံအလုပ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရင် စိတ်ဖိအား ပိုနည်းတတ်တယ်။ အရံအလုပ်က အလုပ်ကောင်းလို့ ပင်မအလုပ်ဖြစ်သွားရင် သူဋ္ဌေး ဖြစ်ဖို့ မဝေးတော့ပါ။ ကဲ.. ဆွေးနွေးကြည့်ကြမယ်။ လမ်းဘေးဈေးဆိုင် ဖွင့်ဖို့ဆိုရင် ၁။ သိက္ခာချရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ၊ လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ […]
ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ် ပြုံးမပြတတ်တဲ့မျက်နှာထက် လိုအပ်ရင်မျက်နှာချိုသွေးတဲ့ လိုပြုံးတွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ရတာထက်သာမှအတူနေချင်တဲ့ အဖော်ပြုခြင်းကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ မယုံကြည်ရတာထက်အယုံသွင်းနေတဲ့ ရိုးသားမှုကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ဆိုးကွက်ကိုပဲအပြစ်တင်တာထက်ဘာလုပ်လုပ်အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့ မျက်လုံးတွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အားနည်းချက်ကိုဝေဖန်တာထက်အားသာချက်ကိုမချီးမွမ်းချင်တဲ့ မနာလိုဝန်တိုမှုကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာထက်နောက်ကွယ်မှကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့ အတင်းစကားတွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးမသိတတ်တာထက်ကျေးဇူးကန်းတာက ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ကိုမုန်းနေသူထက်မာယာတွေနဲ့ ချစ်ဟန်ဆောင်နေသူကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အဝေးကရန်သူထက်နောက်ကျောကိုဓားနဲ့ထိုးမယ့် အနီးကပ်မိတ်ဆွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တာထက်စိတ်ထားမလှတာက ပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ လောကမှာ…ပညာမဲ့လူယုတ်မာထက်ပညာတတ်လူယုတ်မာက ပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ Credit – ဒေါ်အိ (Scrapmrho)
တကယ်လို့သာ ၁။တကယ်လို့ မင်း နှစ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့လို့ တော်တော်ကြာကြာ စောင့်ပြီး ပြန်မလာဘူးဆိုရင် …ထပ်မပို့ပါနဲ့တော့…သူ မင်းကို ဂရုမစိုက်လို့ပါ…. အပင်ပန်းခံပြီး မစောင့်ပါနဲ့တော့။ ၂။တကယ်လို့ တစ်ယောက်တည်း ၀မ်းနည်းတဲ့အခါ…အခန်းထောင့် တစ်နေရာ သို့မဟုတ် အိပ်ရာထဲမှာလှဲပြီး ငိုချလိုက်ပါ… ကိုယ်ချင်းစာ သနားပေးမဲ့သူကို လိုက်မရှာနေပါနဲ့…. ငိုပြီးတာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အသက်ဆက်ရှင်ပါ။ ၃။တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းကို ဥပက္ခာပြု လျစ်လျူရှုလာတယ်ဆိုရင်…သူနဲ့ ခွဲခွာဖို့ ပြင်ဆင်ပါ….မင်းကို နားမလည်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ မင်းနဲ့ မလိုက်ဖက်ပါဘူး။မင်းရဲ့ အကြင်နာ မေတ္တာ ၊ ချစ်ခြင်းတွေကို ဆက်လက် ပေးဆပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဆုံးသတ် နာကျင်မှုဟာ မင်းကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ. သူကတော့ ဘယ်တော့မှ မင်းအတွက်ဝမ်းနည်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်အတွက် ဒီလောက် […]
နေကြည့်လိုက်ပါ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာအယုံအကြည်လွယ်တယ် ။ခံစားရလွယ်တယ်။ အားနာတတ်တယ် ။အစွဲအလမ်းကြီးနေတတ်တယ် ဆိုရင်အဲဒီ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ နောင်တတွေနဲ့အလိမ်အညာတွေပဲ ခဏခဏ ရနေလိမ့်မယ်။ နေကြည့်ပါ….။မပြတ်သားရင် အကြိမ်ကြိမ် နာကျင်ရမယ်မစွန့်လွှတ်ရင် ဘဝပါ ပေးဆပ်နေရမယ်။ဖတ်တွယ်ထားမိရင် လှည့်စားတာ ခံရမယ်။အဲဒီတော့ ရက်စက်တတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် နေကြည့်ပါ။ အရမ်းချစ်ပြရင် အထင်သေးတာ ခံရမယ်သူမရှိရင် မနေတတ်ဘူး ခံစားပြနေရင် အမြဲအရှုံးပေးနေရမယ်သစ္စာရှိရှိ ကိုးကွယ်ဖို့ ဆိုတာကလဲ တန်တဲ့သူက ရှားတယ်လေအဲဒီတော့ မာနကြီးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် နေကြည့်ပါ။ နုံလွန်းရင် အချိုးအဖဲ့ ခံရမယ်။အားနာတတ်ရင် တတ်နင်းခံရမယ်။သနားစိတ် ဝင်သွားရင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံထိမယ်။အဲ့ဒီတော့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် နေကြည့်ပါ။ စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ဂရုစိုက်ပြရင် အစော်ကားခံရမယ်။အသည်းအသန်ဖြစ်ပြရင် ပစ်ချခံရမယ်။အချိန်ပြည့် သတိရနေရင် မျက်ရည်မျက်ခွက်ဖြစ်နေရမယ်။အဲဒီတော့ အေးစက်စက် မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် နေကြည့်ပါ။ credit-Kyat LynnKhatt
Single Mother နဲ့ မွေးစာရင်းပြဿနာ ဖခင်မဲ့နေသောကလေးများကိုစာနာသင့်ပါတယ်။ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ဘဲရခဲ့တဲ့ကလေးကိုတာဝန်ယူရမဲ့ခက်ခဲလွန်းလှတဲ့မိခင်တွေနဲ့ဒီကလေးတွေ ကိုအထပ်အခါခါထိုးနှက်ဖို့ဘဲဒီလူ့အသိုင်းဝိုင်းကလုပ်နေကြလို့ပါ။ မြန်မာ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းသည် ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား မိခင်၏ အခန်းကဏ္ဍထက် ဖခင်၏ အခန်းကဏ္ဍ က ပိုမိုအရာ ရောက်သည်ဟု ပြောဆိုရမည့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားတယောက်တွင် မွေးဖွားလာသည်မှစ၍ ပထမဦးဆုံး လူစာရင်းသွင်းသည် ဟု အလွယ်ပြောရမည့် မွေးစာရင်းကို စတင်ပြုလုပ်ရခြင်းက ထိုကလေးအတွက် ဖခင်အမည်နှင့် ဖခင်၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်တို့မှာ အရေးတကြီး လိုအပ်လာသည်။ မွေးစာရင်းပြုလုပ်ခြင်းမှာ မိစုံဖစုံ မွေးဖွားလာသည့် ကလေးငယ်တယောက်အတွက် လွယ်ကူနိုင်မည် ဆိုနိုင်သော်လည်း ဖခင်မဲ့နေသည့် ကလေးငယ်တဦး၏ ဘဝအတွက် များစွာ ခက်ခဲစေသည်။ ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုး ရောက်ရှိလာသည့်အခါ မိမိအသက်ကို စတေး၍ သေမင်းနှင့် စစ်ခင်းမွေးဖွားပေးခဲ့သော Single Mother […]
Posted in: Articles, Family, Knowledge, LifeTagged: Article, family, Knowledge, LifeLeaveacomment
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လူငယ်များအလုပ်လုပ်ကြရန်လို နိုင်ငံတော် တိုးတက်စေရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လူငယ်များအလုပ်လုပ်ကြရန် လိုကြောင်း ဆရာဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က ပြောဆိုထားရာ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး . . . . လူငယ်တွေက သင်တန်းတွေတက်ပြီးရင် ဝန်ထမ်းပဲလုပ်ကြတယ်။ သူတို့တွေ ပညာသင်နေတာဟာ လစာကောင်းကောင်းရမယ့် အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအယူအဆကို ပြောင်းလဲရမယ်။ နိုင်ငံရေး တိုးတက်တယ်ဆိုတာက လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေမြင့်တက်လာတာပဲ။ ဝင်ငွေမြင့်တက်ဖို့ဆိုရင် ဝန်ထမ်းစိတ် မွေးနေလို့မရဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်။ အခုက လူတော်တော်များများက ဘွဲ့ရအလုပ်လျှောက်ပြီး သူများဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လိုစိတ်တွေ ပျောက်နေတယ်။ ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာ လူညံ့တွေလုပ်တာလို့ မြင်စေချင်တယ်။ ဆရာတို့လည်း အရင်ကလုပ်ခဲ့တာ။ အဲဒီတော့ လူညံ့စာရင်းထဲသွင်းရမှာပဲ။ သူများဆီမှာ မှီခိုပြီးလုပ်နေတာကို ကျေနပ်နေမယ့်အစား ကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းလေးလုပ်ပြီး ဘယ်လိုရှာမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်တယ်။ ကိုယ့်စွမ်းအားကို အရင်တည်ပြီး […]
Posted in: Articles, LifeTagged: Articles, LifeLeaveacomment
အတွင်းစိတ်ထဲမှာသာ အာရုံအပြည့်အဝ စူးစိုက်ထားမယ်ဆိုရင်
အတွင်းစိတ်ထဲမှာသာ အာရုံအပြည့်အဝ စူးစိုက်ထားမယ်ဆိုရင် ဖေ​ဖေ သမီး ဘုရား​ကို ​နောက်​တစ်​ခါ ထပ်​မသွား​တော့ဘူး ဘာဖြစ်​လို့လဲ သမီး ဘုရား​ကို သမီးသွား​တော့ ​တွေ့တဲ့လူတိုင်းက ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့ အချိန်မှာတောင်​ ဖုန်းသုံး​နေတဲ့သူနဲ့ အတင်း​ပြော​နေတဲ့သူနဲ့ ဘယ်​သူမှ တလေးတစား မရှိကြဘူး သူတို့​အားလုံးဟာ သူ​တော်​​ကောင်း​ယောင်​ ​ဆောင်​​နေကြတာပဲ ​ဖေ​ဖေ။ အင်း ဒါဆို သမီး ဘုရား​ မသွား​တော့ဖို့ မဆုံးဖြတ်​ခင်​ ​ဖေ​ဖေ သမီးကို တစ်ခုလောက်​ လုပ်​ခိုင်းလို့ရမလား ​ပြောကြည့်​​လေ ​ဖေ​ဖေ ဘာများလဲ ဒါဆို သမီး ဖန်​ခွက်​ထဲ ​ရေအပြည့်​ထည့်​ပြီး ဘုရားကို ၂ ပတ်​ လမ်း​လျောက်​ရမယ်​ ဒါပေမယ့်​ ​ရေ​တော့ လုံးဝမဖိတ်​ရဘူး​နော်​။ဒါ​လေးများ ​အေး​ဆေး လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ ​ဖေဖေ။သမီး ပြန်ရောက်ပီ ဖေဖေ ဒီမှာကြည့်​ ​ရေ […]